Thursday September 26, 2019 - 10:17:56 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Faayaz Sarraaj oo ah R/wasaaraha xukuumadda Alwifaaq ayaa kalimad uu ka jeediyay shirka Q.Midoobay ee ka socda magaalada New York wuxuu weerar afka ah ku qaaday dowladaha ku lugta leh dagaalka Liibiya.
Wuxuu sheegay in taageerada uu Xaftar ka helayo dowladaha Imaaraatka Carabta, Masar iyo Faransiiska ay sababeen in uu laayo kumanaan kun shacab Liibiyaan ah islamarkaana uu halis geliyo duulimaadyada garoonka diyaaradaha magaalada Daraabulis.
"Dhibaatada ay Liibiya marayso waxaa sabab u ah dowladaha Ajanbiga ah ee taageerada siinaya Mujrim Khaliifka Xaftar" ayuu yiri madaxa xukuumadda Alwifaaq.
Faayaz Alsarraaj ayaa kalimaddiisa kusoo bandhigay sawirro lagasoo qaaday haraadiga hub ay soo saareen Faransiiska iyo Imaaraatka Carabta oo lagasoo furtay maleeshiyaadka Xaftar.
Dowladaha Imaaraatka iyo Masar ayaan qarsan taageerada ay siiyaan Xaftar oo sheegta in uu la dagaallamayo wax uu ugu yeeray Argagaxiso balse dowladda Faransiiska ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamtay eedaymaha loo jeediyo ee ku aaddan in ay qeyb ka tahay dagaalka Liibiya.
ku darso Channelka SomaliMeMo ee Telegramka halkan Guji ama@somalimemo1